Welcome to Aayaha Nolosha » BARO INTA AADAN U DABAAL-DEGIN
BARO INTA AADAN U DABAAL-DEGIN
Dumar badan ayaan waxba kala socon taariikhda maalinta loogu magac daray Siddeeda Maarso ama 8 MARCH. Haddii aad aragto maalin la dabaaldagayo wax lagama maarmaan ah inay jirto sabab iyo ujeeddo loo sameeyey, balse aanay ahayn wax si dabiici ah u yimid oo kaliya.
Taariikhda dhabta ah ee 8-da Maarso.
Sanadkii 1923 waxa banana bax weyn sameeyey dumarka ku dhaqan koonfurta Ameerika iyo aasiyada bari, iyagoo ka cabanayey in laga daayo in ragoodu ka kireeyaan rag kale, si ay u helaan dhaqaale.
Balse aan su’aallo weydiiyo dumarka Soomaaliyeed.
= Mala dulmiyay?
= Ma ha codayn ayaa lagu yiri?